प्रचण्ड – नेपाललाई अचम्मित पार्दै गृहमन्त्री बादलले यो के गरे ? – Khabar 27 Media
February 19, 2021 Shyam LamaLeaveaComment on प्रचण्ड – नेपाललाई अचम्मित पार्दै गृहमन्त्री बादलले यो के गरे ?
‘माओवादी निकट भए पनि पार्टी विभाजनपछि उनीहर गृहमन्त्री थापाकै लाइनमा नभएकाले सरुवा गर्न खोजिएको हो,’ स्रोतले भन्यो । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका उपसचिव–सहसचिवहरु गृह लैजाने र गृहका केहीलाई अन्यत्र पठाउने योजना बनाइएको छ । आजकोकान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।
२ दिन नहुँदै सरकारी वोकिलसंग दिनेशले यस्तो बयान फेरेपछि घ,टनाले लियो यस्तो मोड